नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी थपियो, कुन पदमा कति ? – News Portal of Global Nepali
नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी थपियो, कुन पदमा कति ?
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा तीन हजार ५९६ दरबन्दी थप भएको छ । तीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र तीन प्रहरी उपरीक्षकसहित दरबन्दी थप भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार थपिएको दरबन्दी कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई पत्राचार गरेसँगै पदपूर्ति कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ ।